Ra`iisul wasaaraha Xukuumada Soomaaliya oo Wacdaro ka dhigay Fagaaraha Tarbuunka ee Degmadda Hodan -
Ra`iisul wasaaraha Xukuumada Soomaaliya oo Wacdaro ka dhigay Fagaaraha Tarbuunka ee Degmadda Hodan
Ra`iisul wasaare Xasan Cali Khayre ayaa xalay waxaa uu booqday qaar ka mid ah degmooyinka Gobolka Banaadir waxaana Halkaas kula kulmay dhalan yaro farabadan oo degmooyinkaas ku sugnaa.
Booqashada Ra`iisul wasaaraha degmooyinka ayaa waxaa la sheegay in ay ahayd mid qorsoodi ah oo aan loo sheegin shacabka. Xasan Cali Khayre ayaa waxaa uu booqday degmooyinka Yaaqshid,Kaaraan,Howl Wadaag iyo degmada Hodan. Afarta degmo ee Ra`iisul wasaaraha xalay uu booqday ayaa waxaa uu si caadi ah ula kulmay dhalan yarada oo uu lakaftamaayay.
Wuxuu la ciyaarayay wax yaabaha ay xiiseeyaan ama markaas iyada ah gacanta kula jireen, sida laa dhuuga oo kale. Fagaaraha Tarbuunka ee degmada Hodan ayuu kula kulmay dhalin yaro ciyaarayay laa dhuuga, Ra,iisul wasaaraha ayaana si caadi ah ula ciyaaray dhallinyaradii.
Qaar ka mid ah dhallin yarada ayuu Ra`iisul wasaaraha waxaa uu weydiiyay qofka uu yahay shaqsiyan qaarkood magaciisa ay gafeen qaarna way sheegeen qosol iyo kaftan ayaa ka dhacay degmooyinkaas xalay.
Tan ayaa haddaba kamid ah xaalada amaanka magaalada Muqdisho ee sii hagaagaysa marba marka ka dambeysa.
Al-Shabaab oo ku faanay in ay dileen Rag cadaan ah
Askarigii ka danbeeyay dilkii Wasiir Cabaas Siraaji Oo Maanta Dil Lagu Xukumay